Shiinaha Spout boorsooyinka-B warshad iyo saarayaasha | Hong Bang
Kabo jeex ah
Faa'iidada Foojooyinka Baakadaha
Kiishka qashinku waa hal-abuurnimo qaab wax lagu duubo oo naqshad gaar ah u leh waxyaabaha dareeraha ku saleysan Sababta ka dambeysa aqoonsiga boorsooyinkaan burburay ayaa ah adeegsigeeda qaab saaxiibtinimo leh oo ku habboon kaydinta cabitaannada, waxyaabaha duugga ah ama dabacsan. Ka sokow, marka la barbardhigo PET-ga caadiga ah ama dhalooyinka dhalada ah, boorsooyinka dhibku ka soo gaadho way ka sahlan yihiin gaadiidka waxayna ku habboon yihiin khaanadaha tafaariiqda. Inta badan waxaa loo isticmaalaa alaabooyinka sida dhaqidda shaashadda batroolka, dhallaanka jelly, cuntada dareeraha ah, cabitaanka qabow iyo musqulaha iwm.
Boorsooyinka la yaqaan 'Speuts boouts' ayaa dib loo xidhi karaa oo lagu soo saaray alxanka iyo dabool. Cabbitaanadan waxaa loo farsameyn karaa xakamaynta qulqulka, ku habboonaanta iyo badbaadada sidaa darteedna waxay ku habboon yihiin noocyada dareeraha ah ee alaabooyinka sida cabitaannada, suugada ama wakiilada nadaafadda. Cabirka iyo foomka waa loo habeyn karaa hadba sida ay macaamiishu ugu baahan yihiin uguna baahan yihiin.
Pack Smart sidoo kale waxay bixisaa boorsooyin isku-dhafan oo ay ku jiraan qalabyo iyo xiritaanno iyadoo loo eegayo qeexitaanka alaabooyinka kala duwan.
Waa tan HONGBANG Baakadaha. Waxaan bixinaa xalal kala duwan bacaha baakadaha cuntada loogu talagalay baahiyaha iyo codsiyada kala duwan Noo sheeg shuruudahaaga waxaan buuxin doonaa dhammaan baahiyahaaga. Ma horumarinayno alaabada oo waxaan isku dayeynaa inaanu kuu kaxeyno dhankooda; Waxaan dhegeysaneynaa baahiyahaaga iyo injineernimada hal-abuurka ah ee xallin doona caqabadahaaga baakadaha.
Muuqaalka iyo Opiont
Daabacaadda 'Vivi', dhalaalaya ama matte dhammaatay
Futada iyo Furaha lidka-liqidda
Gacan (La habeeyay)
Qaab Gaar ah
Istaag ama fidso
Qaab-dhismeedka Caadiga ah (Maaddooyinka) ee Pouches-ka la isku qasayo
Lakabka Dhexe: Diidmada-caddaynta, iyo Falimaha oo ah caqabad difaac ah si loo hubiyo in waxyaabaha ku jira kiishka ay ahaadaan kuwo ammaan ah oo cusub.
Waxyaabaha Pasty iyo Liquid
Alaabada Guriga iyo Beerta
Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda
Warshadaha & Baakadaha kale
Customization Aan Helno Xiriir
Hore: Kabo jeex ah
Xiga: Xajmiga Xawaaladda-C
Kabadhada Gawaarida Gaarka ah
Jeebka Istaag Iker Flexsiable
Bacda Istaag Foosada
Custom Daabacaadda caaga Film Rolls Daabacaadda for ...